के हो पाठेघरको क्यान्सर ,कसरी बच्ने ? | www.aagopati.com Websoft University
के हो पाठेघरको क्यान्सर ,कसरी बच्ने ?
क्यान्सरका कारण श्रीमतीको निधन भएपछि नुवाकोट त्रिशुलीका कुमार अधिकारी आफुलाई पनि क्यान्सर हुन्छ कि भन्ने आशंकामा नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउनुहुन्छ । क्यान्सरले थलिएकी श्रीमतीको मंसिर ९ गते निधन भएपछि उहाँ शोकसँगै सचेत बन्नुभएको हो । उहाँ जस्तै दोलखाकी पवित्रा कार्की पनि क्यान्सरबारे निकै सचेत हुनुहुन्छ ।
त्यसैले उहाँ नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउन अस्पताल जानुहुन्छ । तर सबैजना क्यान्सरबारे सचेत छैनन् । यस्तै मध्येमा पर्नुहुन्छ, ललितपुर ईमाडोलकी निरु थापा । क्यान्सर कसरी लाग्छ र लागेपछि के गर्नुपर्छ भन्ने बारे आफूलाई केही थाहा नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
* शारीरिक सम्पर्कमा रहेका वा प्रजनन क्षमता भएका जोसुकैलाई पनि यो रोग लाग्छ । विशेषगरी ३० देखि ६० वर्ष उमेरका महिला, जसको विहे भैसकेको छ ।
* धेरै बच्चा भएका, सानो उमेरका विवाह भएकालाई ।
* यौन व्यवसायमा लागेका महिला वा परपुरुषको संसर्गमा रहेकालाई ।
* लोग्नेको अर्की श्रीमती पनि छन् र उनलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर भएको छ भने पनिसर्न सक्छ ।
* जाँड, रक्सी, चुरोट, खैनी, तमाखु खाने तथा खानपिनमा ध्यान नदिने र कुपोषण भएका महिलालाई खतरा बढी हुन्छ ।
* गन्हाउने पानी बग्ने
* संक्रमण भैरहने
* रगत मिसिएको पानी बग्ने
* महिनावारी नभएको बेलामा पनि रगत देखिने, महिनावारी रोकिएपछि पनि फेरि रगत देखिने
* पेट फुल्ने
* खुट्टा सुन्निने, ढाड तथा कम्मर लुख्ने र दिसा पिसाबमा समस्या देखिने ।।